Fanambin’ny filoha Rajoelina Andry: “Hapetraka ny governora… Ho lasa 23 ny faritra” | NewsMada
Fanambin’ny filoha Rajoelina Andry: “Hapetraka ny governora… Ho lasa 23 ny faritra”
Nametraka fanamby maromaro ny filoha Rajoelina amin’izao hitantanany ny firenena izao, tamin’ny lahateniny tetsy Mahamasina , taorian’ny fianianana manetriketrika, ny asabotsy teo. Hisy ny fanovana rafitra hanakaiky kokoa ny vahoaka. Tsy ho 22 intsony ny isan’ny faritra fa ho 23 ho tantanin’ny governora.
Fanamby mba hisitraka ny fampandrosoana tandrify azy avy ny any amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy fa tsy ny eto Antananarivo ihany, araka ny nambarany. “Mba hahatanterahana izany, hapetratsika sy homentsika lanja manokana ny governoran’ny faritra hasolo ny lehiben’ny faritra hiandraikitra sy hitantana mivantana ny tetikasam-pampandrosoana isam-paritra”, hoy izy taorian’ny fianianany ny asabotsy teo. Hitarika ny fanatanterahana ireo asa goavana nampanantenaina toy ny fanamboaran-dalana, ny sekoly, ny kianja manara-penitra izy ireo… Mitaky fanovana ny fitantanana any amin’ny sampandraharaha rehetra manerana ny Nosy izany fampandrosoana izany. Hivory matetika hiaraka amin’ny filoha Rajoelina ireo governora ireo, handrindrana izany asa rehetra izany. Ho lasa 23 koa ny isan’ny faritra raha 22 izany teo aloha. Tsy mbola nofaritany anefa na ny fampisarahana ny faritra Vatovavy amin’i Fitovinany izany na tsia.
Haverina ny hasin’ny filohan’ny Repoblika
“Haverintsika ny hasin’ny filohan’ny Repoblika ka mba ho maodely. Filohan’ny Repoblika mendrika ny vahoaka malagasy aho, hijoro ho raiamandrenin’ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka, na avy aiza fiaviana na inona finoany sy firehan-keviny. Hihaino ny feon’ny vahoaka ary ho akaiky ny vahoaka mandrakariva ny tenako.” Hifototra amin’ny fikatsahana ny tombontsoan’ny besinimaro sy ny tombontsoa iombonana ny fanapahan-kevitra rehetra horaisiny.
Tonga eto amin’ny kihon-dalan’ny tantaram-pirenena isika. Fotoana izao hanovana ny tantara sy ny fomba fijery ary ny fomba fanaovana politika. Hifanome tanana hiara-kiroso isika satria andraikitry ny rehetra ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Horaisina ny fitarainan’ny vahoaka
Mba hanaraha-maso ny fanafainganana ny asam-panjakana tena hiasa ho an’ny vahoaka, hapetraka ny sampana manokana eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika handray ny fitarainan’ny vahoaka ary hadihadiana avokoa.
Tsy azo ekena ny fanararaotam-pahefana mba hakana tombontsoa manokana, ny gaboraraka, ny fandanilaniam-poana volam-panjakana. Tsy azo leferina ny fanaovana tetikasa tsy misy asa notanterahina, ny fanodinkodinam-bolam-panjakana…
Tsy hisy olona eo ambonin’ny lalàna intsony, na iza na iza. Haverina ny hasin’ny tena tany tan-dalàna. Hatao laharam-pahamehana ny ady amin’ny kolikoly. Takina ny hisian’ny fitsarana marina sy tsy mitanila ary atokisan’ny vahoaka. Tsy ekena ny fitsabahana amin’ny raharaham-pitsarana.
Nohamafisiny ny fanatanterahana ny vina eo amin’ny fananganan orinasa vaventy, ny famokarana herinaratra sy angovo, ny fahavitan-tena amin’ny sakafo amin’ny fampitomboana ny velaran-tany volena… Hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo ny fanjakana.